कपिल शर्मामा शोमा पुगेकी आलिया रिसले आगाे! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
कपिल शर्मामा शोमा पुगेकी आलिया रिसले आगाे!
मुम्बई। बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट आफ्नो नयाँ फिल्म ‘कलंक’ को प्रमोशनकालागि द कपिल शर्मा शोमा गएकी थिइन्। कपिल शर्माको शोमा उनी त्यतिबेला रिसाइन् जतिबेला बच्चा यादवको भूमिका निर्वाह गरेका किकु शारदाले आलिया र उनका पिता महेश भट्टलाई लिएर जोक सुनाए। भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार बच्चा यादवले आफूहरुमाथि जोक सुनाएपछि आलियाले खुलेरै त्यसको विरोध गरेकी थिइन्।
सधैं जस्तै कीकु शारदाले फिल्म कलंकको टिम अगाडि खुलेर जोक सुनाए। सो क्रममा उनले आलिया भट्टलाई सोधे–स्कुटरले कस्तो आवाज निकाल्छ? आलियाले सोधिन कस्तो आवाज निकाल्छ? तब जवाफमा कीकूले भने–भट्ट, भट्ट, भट्ट, भट्ट…।’ यस्तो भनेपछि सबै हाँस्न थाले। त्यसपछि कीकुले सोधे–महेश भट्ट कंस्ट्रक्शनका व्यापार गर्छन? जवाफमा आलियाले भनिन्, ‘गर्नुहुन्न किन?’ जवाफमा कीकुले भने– किनभने फुटपाथ, सडक सबै उहाँले नै बनाउनुहुन्छ नी।’
कीकूको जोक्स कलंको पूरो टिमले रमाइलो मानेर सुने। तर आलिया भट्टलाई भने त्यो कुरा मन परेन। त्यसबाहेक फिलममा उनको को एक्टरका रुमपा देखिएका वरुण धवनले पनि आलियालाई गाली गरे। त्यही कारण उक्त शोमा आलिया धेरै खुल्न सकिनन्।